Mooshinka Trump: Sir weyn oo laga fashilay Aqalka Cad | Xaysimo
Home War Mooshinka Trump: Sir weyn oo laga fashilay Aqalka Cad
Danajiraha Mreykanka ee EU-da Gordon Sondland aya markhaatifurkiisa ku sheegay arrimo culus
Haddana waxaa gudaha galaya biyo, waxayna su’aal ka taagantahay in xildhibaanada Aqalka Sare ee xisbiga Jamhuuriga ay Trump markale u geyn doonaan doonta badbaadada ka hor inta uusan ku hafan hirarka cartamaya.
Sondland waxa uu ahaa danajiraha Maraykanka u qaabilsan Midoowga Yurub, waxaana uu la shaqaynayay garyaqaanka gaarka ah ee Trump, Rudy Giuliani, kaas oo uu kala shaqaynayay arrimo la xiriira in dowladda Ukrain ay gacan ka siiso ol’olihiisa doorashada madaxtinimada.
Waxyaabaha uu sheegay waxaa ka mid ah in booqashadii madaxweynaha Ukrain Volodymyr Zelensky uu ku tagay Aqalka Cad ay ku timid shuruud adag oo ah in Ukrain ay furto baaritaan madaxweynaha ka caawin kara in dib loo doorto. Sondland ayaa sidoo kale aaminsan in hakintii ku timid kaalmadii military ee uu Maraykanku siinayay Ukrain ay ugu wacnayd isla sababtaasi.
Qof kasta oo Aqalka Cad joogay, oo ay ka mid yihiin ku simaha Agaasimaha Guud Mick Mulvaney, xoghayaha arrimaha dibedda Mike Pompeo iyo la taliyaha amniga qaranka John Bolton iyo kuwa kale ayaa dhammaantoodba ogaa arrinka la maleegayey.
Ereybixinta “bombaano siyaasadeed” ayaa beryahan aad loo isticmaalaa, balse qiraalka Sondland oo ka duwan af-gobaadsigiisii hore, ayaa saldhig u ah baaritaanka socda ee la doonayo in xilka looga xayuubiyo Donald Trump.
Haddaladan qiraalka tooska ah, oo uu waliba danajiraha sheegayo in uu idan ama fasax ka haystay madaxweynaha, ayay markani aad ugu adkaan doontaa Trump in uu yiraahdo “waxbo kama ogeyn’ waxa dhacayay.
Trump ayaa marar badan horay u beeniyay eedeymo loo soo jeediyay
Trump oo markasta dafira wixii lagu qabsadaba, ayaa isaga oo xeendaabka Aqalka Cad dhexdiisa ka hadlaya wariyeyaasha ku yiri “Kaasi ma ahan nin aan aad u garanayo”.
Waxaa aad loo sugayay hadalka Sondland
Dadka difaaca madaxweynaha waxa ay ku andacoon karaan in Sondland uu isaga rakibanayo sheeko khiyaali ah, xusuustana ay ka dansan tahay, inkasta oo uuba gudbiyay xaanshiyo caddeynaya waxyaabaha uu ka hadlayo.
Difaaca kaliya ee haray ayaa ah in madaxweynaha uu leeyahay awoodo ballaaran oo ku saabsan in siyaasadda arrimaha dibedda uu u fulin karo qaab uu hoggaamiyeyaasha dalalka kale ku cadaadin karo in ay baaritaan ku furaan qofka uu madaxweynuhu damco.